Ukwesaba kwabantwana kunye nokulungiswa kwabo
Ukwesaba kwabantwana kukufumana amava amaninzi ebuntwaneni, ngamaxesha ambalwa avela kamva kwimpilo kamva. Ngokweziphumo zezifundo ezithile, umntwana ngamnye wesibini ukwesaba omnye okanye omnye ubudala. Ngokuqhelekileyo zivela kubantwana abaneminyaka emibini ukuya kweyisithoba.
Ukwesaba kwabantwana kunye nokulungiswa kwabo bekude kube yinto yokufunda ngokucophelela ngabaninzi beengqondo ezivela kumazwe ahlukeneyo. Okwangoku, kukho iindlela ezininzi zokuchonga ukwesaba nokuzilungisa. Eyona nto ibonakalayo kwaye isebenzayo ichazwe ngezantsi.
Ukudweba yindlela efanelekileyo yokulahla ukwesaba kwabantwana. Ukudweba, kufuneka ulungise amaphepha ephepha kunye nopende. Kulo phepha, umntwana kufuneka atyeke into eyoyikisayo. Kungcono ukuthabatha nomntwana, ukubonisa inguqu yakho yemicimbi. Xa umzobo usuphelile, kufuneka ucele umntwana ukuba achaze lo mdwebo. Ngexesha leenkcazo kubalulekile ukubuza imibuzo yokucacisa. Ukuba, umzekelo, umntwana ususe inyoka, ngoko kukufanelekile ukuba kubuze ukuba iyintombazana okanye inkwenkwana. Ukuba umfanekiso ubonisa umlilo, kuyafaneleka ukuba kubuze ukuba kutheni kwenzeka. Kubalulekile ukuxhasa inxaxheba intetho, ukudumisa umntwana.
Emva koko, xelela umntwana ukuba kutheni ukwesaba kwakhe kungento. Kubalulekile ukwenza oku ngolimi oluqondakalayo kumntwana, amagama angalondolozwa ngemidwebo. Emva kokuba umntwana eqonde yonke into, unokuhlela "ukutshiswa kwemizi" yemidwebo. Kodwa ungayikhohlwa ngemithetho yokhuseleko, ngoko kukulungele ukuqhuba isithethe kwindawo yokuhlambela.
Kuyafaneleka ukukhumbuza ukuba ukuphelisa ngokupheleleyo ukwesaba iseshoni enye akunako. Kungenzeka ukuba, ukufezekisa iziphumo ezifunekayo, kuya kuthatha malunga neveki ezimbini. Iiseshoni kufuneka ziqhutywe rhoqo, ekubeni ukuphelisa ukwesaba kwabantwana kungenziwa kuphela ngovavanyo olusesikweni.
Ngokuqhelekileyo imizobo enjalo uncedo kwimeko apho ukwesaba kuvela ngenxa yeengcamango zabantwana abazizityebi, okwenzekayo ngaphambili ebomini bakhe, kodwa eqikelelwe kubo. Ukuba, nangona kunjalo, imbangela yokwesaba ngumcimbi wenene (umzekelo, ukuwa kwephakamileyo, ukuluma kwenja), ngoko ukukrazula ukuloyiko olunjalo kunceda kuphela kwiimeko ezinqabileyo. Kufuneka ukhumbule ukuba le ndlela ayinakusetyenziswa ukuba akukho xesha elaneleyo ukususela kwimeko yesiganeko sangempela, kuba oku kunokunyusa nje imeko.
Ukukrazula ukwesaba komntwana, ezinxulumene neengxaki zokulungelelanisa kuluntu, indawo evaliweyo, ukwesaba isijeziso sabazali, iingcali zincoma ukusebenzisa imidlalo yokudlala.
Ingundoqo yomdlalo kule ilandelayo: kubalulekile ukukhetha iqonga lomdlalo, apho abadlali bekhona khona. Umsebenzi womququzeleli ukubandakanya abadlali. Lowo ubanjwe, uba ngumkhokeli. Imoya emdlalweni kufuneka ibe nobungane kunye nokuzonwabisa njengoko kunokwenzeka. Abazali bafanele bathathe inxaxheba kulo mdlalo, ngamanye amaxesha bahlukane nomntwana.
Umdlalo onjalo unceda ukwesaba ukujeziswa. Ukongeza, ubuyisela ngokugqibeleleyo ulwalamano olufihliweyo phakathi komntwana nabazali bakhe.
Umdlalo wokufihla uze ufune
Lo mdlalo owaziwayo uyaziwa kusukela ebuntwaneni. Kwakhona kunceda ngokupheleleyo ukunqoba ukwesaba: ukwesaba kwendawo evuliwe, ubumnyama okanye iimvakalelo zodwa. Ukuze kufezekiswe umphumo omkhulu, umbonisi ungcono ukutyumba umntwana. Kubalulekile ukuxubusha kwangaphambili kwiindawo ongenakuzifihla, uze ucime ukukhanya okubalulekileyo, ushiye kuphela, umzekelo, u-TV osebenzayo okanye ukukhanya ebusuku.
Kufuneka ukuba uqaphele ukuba ukuba umntwana akafuni ukudlala lo mdlalo okanye unesibonakaliso esincinci sokwesaba, ngoko akunako ukunyanzeliswa, nangayiphi na imeko, inokubangela ukwandisa imeko.
Ukuba awukwazi ukujamelana noyiko lwabantwana bodwa kwaye akucaci indlela yokujongana nemiphumo yabo, ngoko unako ukubuyela kwingcali-yengqondo yengqondo yomntwana. Ugqirha uya kukuxelela indlela yokulahla ukwesaba umntwana analo. Kwiimeko ezininzi, ingxaki yoluphi uloyiko lususwe nakwiimeko ezininzi ezingakuhoxiswa kwaye ezinzima, kodwa akunqweneli ukulibaziseka ixesha, ngaphandle koko ingxaki yengqondo yengane inokudandatheka.
Ukukhulisa umntwana womyeni komnye umtshato
Imithetho yabazali ekukhuliseni abantwana
Ukuphuhliswa kwengqalelo kwengqalelo yomntwana
Abantwana abonwabileyo - abazali abonwabileyo
Iimpawu zokubhabisa abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-1 ubudala
Imithetho yentleko kubantwana
Izihlobo ezikhohlisayo zomntwana
Maxim Vitorgan okanye uKsenia Sobchak? Abaqabane abakwazi ukwahlula kwisithombe
Ndingafuna phi ukunyusa?
Senza imibuliso yomtshato ngokuchanekileyo
Imikhwa emibi yeintsana
I-Cocktail Ingozi Eyesithathu
I-Biography ye-actor Gosha Kutsenko
Indlela yokulahla uthando lomntu
Kuthekani ukuba umhlobo wakho utshatile?
Pelmeni kunye nenkukhu inyama
Iipropati zokuphilisa i-hog uterus
Iibhisikidi ze-Ginger "Zesiko"
Isilathisi sokubangela ukulahleka kwesisindo
I-Lentil pate nama-walnuts
Iifilimi ezidumileyo zakwamanye amazwe ngeenja